Iibhokisi zezipho, incwadi yokubhalela, izitikha zeTattoo-iYuxingyuan
Ndikulungele ukusebenza naweukwenza ingomso elingcono.
I-Shenzhen Yuxingyuan Isipho Packaging Co., Ltd.yishishini lokushicilela kunye nokupakisha kwishishini lokudibanisa uyilo, ushicilelo kunye nolwenziwa emva. Ingcali ekuprintweni kwazo zonke iintlobo zeebhokisi zokupakisha, iibhokisi zemibala, iibhokisi zekhadi, amakhadi ombala, iialbham zentengiso, iithegi, iincwadana zemigaqo, iingxowa zephepha, izitikha, incwadana, izincamathelisi zomvambo, iialbham zemifanekiso, iibhokisi zezacholo, iibhokisi zeboutique…
Ukubonelela abathengi ngoshicilelo olusemgangathweni kunye neemveliso zokupakisha kunye neenkonzo.
Noodles iphepha Special ne isitya pa olugqibeleleyo pa ...
Ibhokisi yesipho esilula Indima yeebhokisi zezipho Ukubukeka okuqaqambileyo, okwahlukileyo okunokusonga izinto, ...
iinkcukacha ezenzelwe wena, intle ...
Izitikha zetattoo yentyatyambo Ubuhle bezincamathelisi ze tattoo zikunika ubuhle obuncinci kubomi bakho obuqhelekileyo. ...
Ipatheni Cover ulwenziwo iinkcukacha custo ...
Incwadana yamaphepha entwasahlobo yomfundi okhethiweyo Khetha iphepha leencwadana zabafundi: Okokuqala, umgangatho wepape ...
Incwadana yamanqaku ephezulu yeshishini inembonakalo enkulu kunye nembonakalo yesitshixo esiphantsi ngaphandle kokulahleka ...
Inkampani ihlala ithatha uphuhliso lweshishini eliphambili lokushicilela njengolwalathiso lwenkqubela phambili, igcina isantya namaxesha, kwaye ihambelana nolwazi lweshishini lokushicilela kunye neendlela ezikhoyo.
Sinezinto eziphambili zokuprinta kunye nenqanaba lobuchwephesha lobuchwephesha.
Uhlobo lwemveliso lusisityebi, ngokuqinisekileyo lunokwanelisa ibango lakho.
Ukuba ufuna, sinabachwephesha abaziingcali ukunxibelelana nawe.
Ngaba abantu abenziwe umvambo baya kukhetha izitikha ze tattoo？ Wonke umntu uqhelene negama tattoo, akunjalo? Kule mihla, emehlweni abantu abaninzi, nabani na one tattoo emzimbeni uya kuthathwa njengomntu wentlalo. Abantu abaninzi ...
Luluphi ulwalathiso olutsha lophuhliso lweemveliso zokubhala
Luluphi ulwalathiso olutsha lophuhliso lweemveliso zokubhala? Kule minyaka idlulileyo, ngokuphuculwa kwemigangatho yokuphila kwabantu, imfuno yabathengi yeemveliso zezinto zokubhala inyukile, ekonyuse ababoneleli bezinto zokubhala ukuba ...
Ncedisa bonke abathengi ngenyameko.
Oko yasekwa, inkampani ibambelele kwifilosofi yeshishini "yentsha, ukusebenza ngokukuko, umgangatho, inkonzo".